Kedụ ụtụ Ọpụrụiche Azụtara Mkpụrụ Ọla Nwere na Illinois?
Nabtụ na Mgbakọ nabgwọ Ahịa Cannabis na Purtụ Ego nke Cannabis
Gini ka iwu kwuru gbasara ụtụ ọka cannabis na ikike ịzụrụ ụtụ cannabis na Illinois?
Edemede 60 na 65 gbarie otu esi atụbata ụtụ isi na azụmaahịa cannabis na Illinois. Nkebi 60 na-ekwu maka ụtụ ahịa Cannabis Ọrụ Ugbo na Illinois, nke na-akọwa etu ụtụ isi si akwụ ụgwọ, ihe ngwaahịa dabara na ya maka ụtụ isi yana otu esi akwụ ụgwọ na nlọghachi nke ndị ọrụ ugbo cannabis gbara. Akụkụ nke 65, n'aka nke ọzọ, na-akọwa Taxtụ Ego Ego Cannabis na Illinois, ihe ọ gụnyere na otu esi anakọta ya n'aka ndị na-azụ cannabis.
Gụkwuo ka ịmụtakwu banyere Iwu ụtụ isi 60 & 65 na Illinois.
Site na ụbọchị mbụ nke Septemba 2019, a ga-atụba ụtụ ahịa ikike ịkụ azụ / 7% na ire mbụ cannabis site n'aka ndị ọrụ ugbo na Illinois. Ngalaba Ego resgwọ nwere ikike ikpebi ọnụahịa nke mkpụrụ osisi cannabis mgbe;
(i) Ndị na-ere ahia na ndị na-azụ ahịa bụ ndị mmekọ
(ii) transferbufe afere abughi site na ahia aka ogologo
(iii) Onye na-azụ ahia na-ebufe cannabis na nzukọ ha na-ekesa ma ọ bụ na-ebute ihe ndị ahụ na-enweghị ike ịkwado uru nke cannabis.
Edemede a na-enyekwa na ọnụahịa nke Ngalaba setịpụrụ kwesịrị ikwekọ na ọnụahịa nke ngwaahịa ndị ọzọ nwere ụdị, agwa, na ojiji ụdị ya. Ma ọ bụrụ na enweghi ngwaahịa dị otú ahụ, Ngalaba ahụ nwere ike ịtụle ngwaahịa na mpaghara dị iche iche nke Illinois.
N'okpuru iletụ Ego nke Cannabis Ugbo na Iri Illinois, ọ bụ ọrụ dịịrị onye na-azụ ahịa mbụ (onye ọrụ ubi) ịkwụ ụtụ ego etinyere. Ndị na-esote azụmaahịa dịka otu ndị nhazi nhazi ekwesighi ịkwụ ụtụ a. Iwu a, n’enye ndi oru ugbo ohere inyeghachi onwe ha site n’inye ha ikike inwetu ego kariri nha ha.
Ndebanye aha nke Cultivators
A na-eme ka ndị niile na-akụ mkpụrụ osisi cannabis na-akwụ ụtụ ikike ikike cannabis na Illinois ka ha tinye akwụkwọ maka asambodo site na Ngalaba Ego ha nwetara. A ga-eme ngwa ndị a n'ịntanetị dịka otu ihe Ngalaba si choro.
Ọ dịkwa mkpa iburu n’obi na ọ bụ naanị ndị rịara akwụkwọ ikikere n'okpuru Iwu Cannabis na Iwu Iwu nwere ike iru eru inye ya asambodo.
Laghachi na Paymentkwụ Taxtụ nke Cannabis Ugbo Iche
Ndị mmadụ, bụ ndị na-akwụ ụtụ ahịa cannabis ọzụzụ na Illinois ka a chọrọ ịlaghachi ma ọ bụ tupu ụbọchị 20 ọ bụla maka ọnwa bu ụzọ. Nlọghachi ahụ kwesịrị ikwupụta:
(1) Aha onye na-akwụ ụtụ;
(2) Adreesị taxpa na adreesị azụmahịa ya;
(3) nnata ire ahịa kwa ọnwa nke mkpụrụ osisi maka ọnwa gara aga;
(4) Onu ego nke anata site na mgbe ahia;
(5) Ntughari dika iwu si choro;
(6) Oge nnata nke ọnwa na-esote oge mkpesa nke aga-eji gbakọọ ụtụ;
(7) Onu ego nke ụtụ kwụrụ;
(8) Mbinye aka nke onye na-akwụ ụtụ; na
(9) Ihe omuma ndi ozo dika nke ngalaba choro.
A ga-akwụghachi nkwụghachi na ụgwọ ịkwụ ụgwọ na elektrọnik. Ndị na-atụ ụtụ isi, ọ na-esiri ha ike ịkwụ ụgwọ elektrọnikọn nwere ike ịrịọ Ngalaba maka ịhapụ ikpo okwu kọmputa.
Enwere ike ịchọ ndị na-atụ ụtụ isi a ka ha kee nloghachi ha iche ma ọ bụ jikọta ya na nloghachi maka ụtụ isi n'okpuru Iwu Mmemme Iwu Ahụike Cannabis.
A na-achọ ka ndị na-akwụ ụtụ isi kwụọ ụgwọ ụzọ ụzọ n'ụzọ anọ ma ọ bụ tupu ụbọchị 7, 15, 22, na ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ọ bụla. Ọ bụrụ na onye na-akwụ ụtụ isi akwụghị ụgwọ ugboro anọ na oge ma ọ bụ kwụọ ụgwọ erughị ka a chọrọ, ọ nwere ike ịta ntaramahụhụ ma ọ bụ nwee mmasị. Ọ bụrụ na ego akwụgo karịrị ụgwọ ụtụ isi achọrọ, mmadụ nwere ike ịrịọ maka akara aka tupu ụbọchị gwụ ụbọchị iri atọ gachara.
Thekwụ ụgwọ maka ụtụ ahịa cannabis na-atụziiri ya na gukpụrụ Iwu Cannabis.
Kedụ ihe mejupụtara Purzụ ahịa Cannabis na Mpụ na Illinois?
Taxtụ ahịa ị nweta ego Cannabis na Mpụ na Illinois ga-amalite ịnye iwu na Jenụwarị 1, 2020. A ga-atụ ụtụ isi na ndị zụtara cannabis n'ọtụtụ dị ka ndị a;
(1) cannabis ọ bụla, na-abụghị ngwaahịa a na-eweta cannabis, nke nwere ọkwa delta-9-tetrahydrocannabinol na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ n'okpuru 35% ga-enweta ụtụ nke ga-abụ 10% nke ọnụ ahịa cannabis.
(2) cannabis ọ bụla, na-abụghị ngwaahịa a na-eweta cannabis, nke nwere ọkwa delta-9-tetrahydrocannabinol nke dị elu karịa 35% ga-enweta ụtụ nke ga-abụ 25% nke ọnụ ahịa cannabis ahụ; na
(3) A ga-atụ ụtụ ahịa mkpụrụ osisi cannabis butere 20% nke ego zụrụ.
Etu a na-anakọta Taxtụ Ego na Cannabis chazụ intụ na Illinois
Dị ka omume ahụ si dị, ndị na-azụ ahịa na-anakọta ụtụ ego maka ndị na-azụ ihe. Ha na-eme nke a site na itinye ụtụ isi na ọnụahịa nke ndị zụrụ ahịa na-akwụ iji nweta cannabis site na onye na-ere ahịa.
Ego ole ụtụ anakọtara ka egogoro n’elu, nke ekwesịrị ibunyeghachi na Ngalaba nnata ego.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-ebo onye zụrụ ya ụtụ karịa ka achọrọ Cannabis Purchaser Excise Tax na Illinois, onye zụrụ ahịa nwere ikike ịrịọ maka nkwụghachi. N'ọnọdụ ebe onye na-akwụghị ụgwọ ụtụ isi ahụ, mgbe ahụ onye zụrụ ya kwesịrị ikwu na ọ ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụ tupu ụbọchị iri abụọ nke ọnwa na-esote ọnwa ịzụta.
Dịka iwu ahụ siri kwuo, ọ bụ ọrụ dịịrị onye na-ere ahịa ịnakọta ụtụ Cannabis Purchaser Excise na Illinois. Ma onye na-ere ahịa cannabis na-anakọta ụtụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ụtụ isi niile kwesịrị ịnakọta ga-atụgharị gaa na ụgwọ nke onye na-ere ahịa ga-akwụrịrị steeti.
Ndebanye aha nke ndị na-azụ ahịa Cannabis
Ndị ahịa azụmaahịa niile na-anakọta ụtụ n'okpuru Iwu Iwu Cannabis na Taxtụ Isi ga-etinye akwụkwọ elektrọniks maka asambodo.
Iwu ahụ kwuru na onye na-ere ahịa ka o toro maka asambodo, ha ga-enwerịrị ikikere.
Kaadị ificationgbapụta Ihe Ọkụkụ Nọmba
Nke a bụ akwụkwọ njirimara a ga-enyefe ndị ọrụ ebe a na-ahụ maka inwetara ọrụ maka ijikwa ma hụ na ogige ndị a rubere isi n'iwu. Ndi Ngalaba Ọrụ Ugbo ga-enye akwụkwọ a.
Achọrọ ka onye ọ bụla na-ere ahịa nwee ezi ndekọ nke cannabis zụrụ, ejide ya, ere ma ọ bụ ekpofu ya. Ha kwesịrị idobe akwụkwọ ọnụahịa niile, ihe ndekọ ahịa, akwụkwọ ụgwọ, yana akwụkwọ ndị ọzọ dabara na ịzụta ire na ụdị nke cannabis.
A ga-edowe akwụkwọ ịzụta ndị a na ụlọ ikike enyere maka erughị ụbọchị 90 site na ụbọchị ịzụta belụsọ ma enwere ntụpụ nke Ngalaba Ego nwetara site na ide.
Akwụkwọ ndị ahụ kwesịrị ịdị na ngalaba ahụ n'oge awa ọrụ mgbe ọ bụla ma ọ ga-adịrịrị maka nyocha site n'aka ndị ọrụ na ndị ọrụ Ngalaba.
Ndị ọrụ nke Ngalaba nwere ikike ijide, ịchọ azụmahịa azụmaahịa, ma ọ bụ weghara cannabis n'aka onye na-ere ahịa na-emebi ihe ọ bụla nke omume a.
Taxestụ isi a manyere cannabis iji hazie ihe ọ ga-eji rụọ ọrụ na Illinois ka a na-enyefe onye ọrụ ubi na onye zụrụ cannabis. Onye na-akụ cannabis na-akwụ Taxtụ Ọrụ Ihe Nleba Anya nke Cannabis na Illinois maka ihe ùgwù nke inweta site na ihe ọkụkụ, ebe onye na-azụ ahịa na-akwụ ụtụ Cancis nke chazụta Ahụhụ na Illinois maka ihe ùgwù nke iji cannabis.